जाँदा जाँदै ………………!
नेपाली समय Loading...२०७६ फाल्गुन ९ शुक्रबार
प्रकासित मिति : २०७४, २७ भाद्र मंगलवार १२:२० प्रकासित समय : १२:२०
राम प्रसाद ज्ञवाली, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
अन्तरस्पन्दनको न्यानो माया ल !
अपूर्ण यात्रा सधै पूर्णता तिर लम्किन्छ । त्यसैले मेरो अपूर्ण यात्रा पूर्णताको गन्तव्य तर्फ लम्किने क्रममा हिजो ललितपुर, तेह्रथुम हुदै ओखलढुंगामा रहेकोमा फेरी त्यहि गन्तव्यको खोजीमा राजधानी काठमान्डू तर्फ जादैछ । तिम्रो साथमा बसेको पनि आज करिब करिब १५ महिना पुगेछ । २०७३ साल आषाढमा तिम्रो साथ खोज्दै खोज्दै तिम्रै काखमा लूटपुटिन आएको थिएँ । त्यतिबेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा यस जिल्लाका तिम्रा सन्ततिको काम गर्न खटिएर आएको थिएँ । हो, आमा त्यो हिजो जस्तै लागिरहेछ । थाहा छैन कति छिटो यो समय बितेछ । आज आएर तिम्रो साथ छुट्ने दिन आइसकेको छ l सम्झिदा कहाली लागेर आउछ । तर पनि यो बाध्यता हो आमा । तिमीले मलाइ सधैको लागि गुमाउने छैनौ । बरु मैले तिमीलाई सधैको लागि पाएर तिमीलाई आफ्नो दिलमा सजाएर जादैछु ।
म तिम्रोमा आउनु अघि तेह्रथुम जिल्लामा कार्यरत थिएँ । त्यहाबाट आउदा पनि मैले तेह्रथुम जिल्लालाई संगै आफै संग लिएर आएको थिएँ । त्यहाको स्मृति, त्यहाको कार्यानुभव तथा शैली मात्र होइन त्यहाका सन्ततिले मेरा प्रति गरेको अथाह मायाको पोको समेत यहि मुटुमा अटाएर आएको थिएँ । आज यहाबाट जादैछु र उही स्मृति, उही माया ममता तथा परिमार्जित कार्यानुभव बोकेर जादैछु । तिम्रोमा आउने बेला कटारीबाट यात्रा गर्दा बर्षातको भेलले तिमी सम्म आउनलाई कति अबरोध गरेको थियो । आज पनि त्यो संझना ताजैछ । यहा आइपुग्दा तिम्रो हेरचाहमा रहेको सच्चा सेवक मेरो हाकिम रहेछन् । उनको सानिध्यतामा मैले कहिले समस्या भोग्नु परेन ।
साच्चै आमा तिम्रो शितलता, तिम्रो कोमलता र तिम्रो सौन्दर्यताले आफ्ना बिगतहरु कति छिट्टो भूलायो मलाइ नै थाहा छैन । म आएकै केहि दिनमा तिम्रा सौन्दर्यहरुको अबलोकन गर्न रामपुर, हर्कपुर र कुन्तादेवी जस्ता ठाउमा पुगें । म जहाँ पुगें तिमीले केहि न केहि नया अनुभव मात्र हैन मलाइ नयाँ नयाँ सिर्जना गर्ने अवसरहरु समेत प्रदान गर्यौ । त्यतिखेर हामी नेपाली सेनाले भूकम्प पिडित तथा विपद प्रभावितहरुको लागि निर्माण गरेको सामुदायिक आवास भवनको निरीक्षण तथा उद्घाटनका लागि गएका थियौं । हो, त्यहि बेला मैले ‘रामपुर हर्कपुर र दर्दपुर’ भन्ने यात्रा संस्मरण सिर्जना गरेको l त्यसपछि पनि मैले अनेकन सिर्जनाहरु तिम्रो प्रभावकै कारण लेखेको छु ।
‘ओखल पोकली, जति सुन्यो उति मिठो मायालुको बोली….’ लोक स्वादको गीत पनि त तिम्रै भूगोलकै कारणले सिर्जना भएको हो । हो ओखलढुंगा ! तिमीसंग रहदा मलाइ तिम्रा जनताका सुख दुखमा साथ दिने, उनीहरुका सेवामा समर्पित हुने र आफ्ना कार्यजिम्मेवारी पुरा गर्ने कार्यका अलावा अन्य रचनात्मक कार्यहरु गर्न उत्प्रेरणा मिलेको छ । तिम्रा कठिन कठिन भुगोहरुमा मेरो पाइला पुगेको छ । मेरा सीर्जनाका श्रोतको रुपमा तिम्रो प्रत्येक ढुंगा, माटोका कणकण, लहरा छहरा, झरना, खोलानाला, वनस्पति मात्र होइन यहाका जनमनको असिम माया, सद्भाव र म प्रतिको अन्त्यहीन बिश्वास मेरा उपहार हुन् । मेरा सम्पति हुन् । आमा तिम्रा अनेकन बिकट र अप्ठ्यारा बस्तिहरुमा कहिले नागरिकता घुम्ती शिबिर लिएर गएँ , कहिले फेरी बजार अनुगमनका शिलशिलामा गएँ । कहिले संस्था अनुगमन त कहिले पर्यटकीय भ्रमणका लागि पनि गएँ । जहा जहा पुगें त्यहा त्यहा तिम्रा सुन्दरता संगै तिम्रा समस्याहरुको समेत बोध भएको छ ।
आमा तिमीलाई पहिरे खोलाले हरेक वर्षायाममा सताइरहन्छ । तिम्रा सन्ततिहरु वर्षायाममा सानो सानो बर्षातको कारणले पनि आवागमनमा समस्या परी आफ्ना महत्वपुर्ण कार्यमा समेत ब्यबधान व्यहोर्नु परेको छ । कतिलाई त त्यहि पहिरे खोलाले निलेको थियो रे भन्ने पनि सुनेको छु ।तिमिले हरेक बर्षातमा एउटा एउटा खड्को पार गर्नु परेको सत्यलाई मैले बुझेको छु । तर पनि मेरो स्तरको प्रयासले तिम्रो दु:ख निवारण गर्न सकेको छैन । आमा तिम्रा हरेक गाउपालिकामा पुग्ने सडक कच्ची छ । तिमीलाई बर्षातको समयमा प्रकृतिले पनि निकै दुख दिन्छिन् । पहिरोले तिमीलाई हरेक बर्ष क्षतबिक्षत बनाउने गर्छ । हो, आमा तिम्रो विषम परिस्थिति देख्दा मलाइ धेरै दुख लाग्छ ।
तिम्रा सन्तानहरु निकै ठुला ठुला पदमा पनि पुगेका छन् । तर तिम्रो बिकासमा जति योगदान पुग्नु पर्थ्यो त्यो पुग्न सकेको छैन । सदरमुकामको बजार क्षेत्रमा दमकल आवागमन गर्न सक्ने बाटो छैन । हुन त तिम्रा १५/१६ बर्ष देखि हराएका छोरा र छोरी फेरी तिम्रो मुहार फेर्ने वाचा गरी फर्कीआएका छन् । आज तिमी संग आठ भाइ छोरा र आठै बहिनी छोरी अनि नाति नातिनाहरु पनि फर्की आएका छन् । सबै काममा खटेका छन् । सबैले प्यारो ओखलढुंगालाई सम्बृद्ध ओखलढुंगामा रुपान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मलाइ थाहा छ तिम्रा जुझारु छोराछोरीहरुले अब लिखुमा पुल बनाउने छन् । पोकली झरनामा नेपालका कुना कुनाबाट पर्यटकहरुलाई आउन, बस्न, भ्रमण गर्न सजिलो हुने गरी सडक यातायात, केवल कार आदिको निर्माणमा तदारुकता देखाउने छन् । रातमाटे झरना, रुम्जाटार, रामपुर आदि ठाउमा पर्यटकको ओइरो लाग्ने छ । म पनि ति पर्यटकको भिडमा देखिनेछु कुनै बेला । हुन त हिजो सम्माननीय राष्ट्रपति श्री बिद्ध्या देवी भण्डारी हेलिकप्टर चढेर यो जिल्लाको बिकट मानिने भूभाग देम्बाडाडामा आएर देम्बा महोत्सब उद्घाटन समेत गर्नु भएको हो । आमा म चाहन्छु भोलि देम्बाडाडामा जान तिम्रा सर्वसाधारण सन्ततिलाई हेलिकप्टर चढ्नु नपरोस् । तिम्रा सन्तति सजिलै संग मोटर चढेर त्यहा पुग्न सकून्, विभिन्न प्रजातिका गुराँसको अबलोकन गरी नेपालको बास्तविक प्राकृतिक सुन्दरता र भौगोलिक मनमोहकतामा रमाउन सकून् ।
मलाइ आसा मात्र होइन पुरै बिश्वास छ अबको दुइ तिन बर्ष पछी तिमि साच्चै सम्बृद्ध हुनेछौ । म त्यस वीचमा सायद धेरै पल्ट भेट्न आएको हुनेछु । मैले अगाडी नै भनिसकें नि, म त यहाबाट एक्लै जादै छैन । तिमीलाई मन मुटु र स्मृतिमा संगै बोकेर जादैछु । तिम्रो चिन्ता गर्ने मात्र होइन तिम्रा बारेमा चिन्तन गर्ने दर्जनौ आफन्त यहि छोडेर जादैछु । मेरा सबै आफन्त तिम्रा त सन्तति र सेवकहरु नै हुन् । हिजो तिम्रो बारेमा धेरै चिन्ता गर्ने तिम्रा सेवकहरु हुन्थे । आज तिम्रो बिषयमा धेरै सोच बिचार गर्ने तिम्रा सन्तति छन् । तिम्रा कतिपय सन्तति जुझारु अब्बल पत्रकार छन्, कति गैर सरकारी क्षेत्रमा रहेर तिम्रा हितमा अनेकन काम गरिरहेका छन् । तिम्रा सेवक त तिम्रै सेवामा समर्पित हुन विभिन्न जिल्लाबाट खटिएर यहाँ आएका छन् । सबैको उद्देश्य एउटा मात्र छ – तिम्रा खातिर काम गर्ने , तिम्रो सेवा गर्ने र तिम्रो भलो गर्ने ।
आज करिब डेढ बर्ष सम्म बस्दा म गुल्मेली आधि र ओखलढुंगे आधि भएको छु । तिम्रो सेवा गर्दा म तिम्रो हुने र तिम्रो साथ छोडेर अन्यत्र जादा म पराइ हुने कल्पना समेत मैले गर्न सक्दिन । तिमी जहा भएता पनि अब तिमी मेरी हौ । म त अब जादैछु । तिमीबाट मात्र छ घन्टाको बाटोको फरक ठाउमा । मात्र छ घण्टा सडक यातायातले टाढा । तिम्रा धेरै सन्तति बस्ने ठाउ त हो नि काठमांडू । म त त्यहाबाट पनि अर्को सरुवामा परी कता कता जानु पर्छ । जहा पुगे पनि तिम्रै दिदि बहिनीको काखमा जाने त हो । ति सबै मेरा आमा नै हुन् । जहा गए पनि आमाको सेवा गर्न पाउने हुँदा मलाइ धेरै गुनासो पनि छैन । आखिर म आमाको सेवाका लागि त जन्मिएको हुँ, यसैमा मेरो सुख छ, यसैमा मलाइ गर्व छ । म सधै सधै यसरी नै रमाउनेछु ।
अन्त्यमा, आजसम्म तिम्रो सेवामा समर्पित भएर यहाँ रहदा मबाट जान अन्जानमा कहीं कतै तिम्रो मन दुखाएको रहेछु भने मलाइ माफ गरिदेउ है आमा । हुन त आमाहरुको हृदय बिशाल हुन्छ, मैले गरेका कमजोरीहरु तिमीले या त बिर्सिसकेकी छौ, या त मबाट कमजोरी नभएको पनि हुन सक्छ । अब भने तिम्रो मुहारमा कान्ति र जीवनमा सुस्वास्थ्य अनि शान्ति र सम्वृद्धिको कामना गर्दै बिदा हुन्छु ।
जय ओखलढुंगा !
जय ओखलढुंगे !!
पात्लेमा शेर्पाको शिली नृत्य प्रशिक्षण सुरु
ओखलढुङ्गान्युज, माघ १६ ओखलढुङ्गा । खिजिदेम्बा गाउँपालिकाको पात्लेमा आजवाट सिली नृत्य प्रशिक्षण सुरु भएको
“सुरक्षित आप्रवासन” सम्बन्धि शक्तिशाली किशोरी समूहको सडक नाटक, “साच्चै कारुणीक”
ओखलढुङ्गान्युज, मंसिर २६ ओखलढुङ्गा । बुधबार ओखलढुङ्गामा शक्तिशाली किशोरी समूहले सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धि सडक
Categories Select Category Flash (2) अन्तराष्ट्रिय (47) अर्थ बाणिज्य (50) कला साहित्य (32) कहाँ के (645) खेलकुद (86) पर्यटन (23) मुख्य समाचार (768) राष्ट्रिय (425) विचार (19) विशेष (277) विश्व (33) शिक्षा (46) श्रीर्ष समाचार (621) समाचार (1,081) संवाद (5) स्थानिय (380) स्वास्थ्य (27)